February 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Maung Pauk at 9:52:00 PM 0
သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Antivirus Sortware - Smadav New Version 2018 Rev 11.82 Pro
31.1.2018 ရက်နေ့ ထွက်လာတဲ့ Smadav New Version 2018 Rev 11.82 ဖြစ်ပါတယ်.. အင်ဒိုနီးရှားက ရေးတဲ့ Smadav ဟာ Windows PC သမားတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့လာခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ.. မောင်ပေါက်လည်း ထွက်သမျကို Update ဖြစ်အောင် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်.. လိုင်စင်ဗားရှင်းက ၄ ဒေါ်လာသာရှိပေမယ့် ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက် Free Version ကိုလည်း ထုတ်ပေးထားပါတယ်.. Free Version ဆိုပေမယ့် Pro နီးပါးလောက် စွမ်းဆောင်ရွည်မြင့်မားအောင် စေနတာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလို ဆိုင်က တစ်ခွေ ၁၀၀၀ နဲ့ဝယ်ပြီး သုံးနေကြတဲ့ Pirate Windows သမားတွေအတွက် Virus အမျိုးမျိုးရဲ့ လက်တည့်စမ်းမှုတွေကို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ.. Official Software တွေဝယ်သုံးဖို့လည်း အခက်အခဲရှိနေကြဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် Crack ထားတဲ့ Software တွေကိုသုံးရင်း Virus ရန်ကို နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်.. ဒီ Smadav လေးဟာ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ခုတလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ သာမန် Virus, Warm, Trojan တွေကို ကောင်းကောင်း နှိမ်နင်းနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်.. ဒါ့အပြင် ခုခေတ်စားနေတဲ့ Virus တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Ransomware ဆိုတဲ့ Virus ကိုလည်း သတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်..
Ransomware ဟာ ကွန်ပျူတာထဲက ဖိုင်တွေကို Lock ခတ်လိုက်ပြီး အခကြေးငွေပေးမှသာ ပြန်လည်ဖေါ်ပေးတဲ့ Virus ဖြစ်ပါတယ်...
သာမန်အားဖြင့်တော့ MSE နဲ့ Smadav နှစ်ခု ထည့်ထားရုံနဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ Virus လောက်တော့ ကောင်းကောင်း ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်..
အောက်မှာ Pro Version ရဖို့အတွက်တော့ ကီး အချို့ ပေးထားပါတယ်.. Register ကိုနှိပ်ပြီး နာမည်နဲ့ ကီးကို မှန်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ..
ကိုယ်တိုင် ကီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ကီးဂျင်နရေတာ ပေးထားပါတယ်.. ကီးဂျင်နရေတာကိုတော့ Antivirus ကိုပိတ်ပြီးမှ Run ပါ.. နာမည်ဖြည့်ရုံနဲ့ ကီးက အလိုလိုထုတ်ပေးပါတယ်..
31.1.2018 ရကျနေ့ ထှကျလာတဲ့ Smadav New Version 2018 Rev 11.82 ဖွဈပါတယျ.. အငျဒိုနီးရှားက ရေးတဲ့ Smadav ဟာ Windows PC သမားတှအေတှကျ အကွိုကျတှလေ့ာခဲ့တာ နှဈအတျောကွာခဲ့ပါပွီ.. မောငျပေါကျလညျး ထှကျသမကြို Update ဖွဈအောငျ တငျပေးခဲ့ပါတယျ.. လိုငျစငျဗားရှငျးက ၄ ဒျေါလာသာရှိပမေယျ့ ဝယျယူဖို့အခကျအခဲရှိတဲ့သူတှအေတှကျ Free Version ကိုလညျး ထုတျပေးထားပါတယျ.. Free Version ဆိုပမေယျ့ Pro နီးပါးလောကျ စှမျးဆောငျရှညျမွငျ့မားအောငျ စနေတာထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ.. ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံလို ဆိုငျက တဈခှေ ၁၀၀၀ နဲ့ဝယျပွီး သုံးနကွေတဲ့ Pirate Windows သမားတှအေတှကျ Virus အမြိုးမြိုးရဲ့ လကျတညျ့စမျးမှုတှကေို နစေ့ဉျကွုံတှနေ့ကွေရတာပါ.. Official Software တှဝေယျသုံးဖို့လညျး အခကျအခဲရှိနကွေဆဲဖွဈတဲ့အတှကျ Crack ထားတဲ့ Software တှကေိုသုံးရငျး Virus ရနျကို နစေ့ဉျ ကွုံတှနေ့ကွေရပါတယျ.. ဒီ Smadav လေးဟာ ဖိုငျဆိုဒျသေးတယျဆိုပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ခုတလောကွုံတှနေ့ရေတဲ့ သာမနျ Virus, Warm, Trojan တှကေို ကောငျးကောငျး နှိမျနငျးနိုငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ.. ဒါ့အပွငျ ခုခတျေစားနတေဲ့ Virus တဈမြိုးဖွဈတဲ့ Ransomware ဆိုတဲ့ Virus ကိုလညျး သတျနိုငျပွီဖွဈပါတယျ..
Ransomware ဟာ ကှနျပြူတာထဲက ဖိုငျတှကေို Lock ခတျလိုကျပွီး အခကွေးငှပေေးမှသာ ပွနျလညျဖျေါပေးတဲ့ Virus ဖွဈပါတယျ...
သာမနျအားဖွငျ့တော့ MSE နဲ့ Smadav နှဈခု ထညျ့ထားရုံနဲ့ တျောရုံတနျရုံ Virus လောကျတော့ ကောငျးကောငျး ထိနျးထားနိုငျပါတယျ..
အောကျမှာ Pro Version ရဖို့အတှကျတော့ ကီး အခြို့ ပေးထားပါတယျ.. Register ကိုနှိပျပွီး နာမညျနဲ့ ကီးကို မှနျအောငျဖွညျ့ပေးလိုကျပါ..
ကိုယျတိုငျ ကီးထုတျခငျြတယျဆိုလညျး ကီးဂငျြနရတော ပေးထားပါတယျ.. ကီးဂငျြနရတောကိုတော့ Antivirus ကိုပိတျပွီးမှ Run ပါ.. နာမညျဖွညျ့ရုံနဲ့ ကီးက အလိုလိုထုတျပေးပါတယျ..
1. Name = www.maungpauk.org
Key = 081200905070
2. Name = maungpauk
Key = 081700808960
3. Name = maungpauk.org
Key = 081200883632
4. Name = http://www.maungpauk.org
Key = 081300503006
5. Name = fb.me/maungpauk.org
Key = 081900004080
6. Name = Maung Pauk
Improvement in sending statistics for Smadav development..
Activate Smad-Turbo (Scanning Faster)
Disable Splash Screen of SmaRTP on Start-up
Download Smadav 2017 Rev 11.65.exe: 1.91 Mb
Download Keygen : 1.43 Mb